Kuzoshikisha ufudu kowekhilikithi eThekwini - Bayede News
Kuzophinde kube nesiphithiphithi esihle futhi eThekwini ngale mpelasonto, kuzobe kudela uMakhasana njengoba iDurban Heat izokwamukela iTshwane Spartans eKingsmead Cricket Ground emdlalweni weMzansi Super League (MSL) kusasa.
Lo mdlalo uzohanjelwa izinkumbi zabathandi bekhilikithi zizoseka iqembu elimele isifundazwe iKwaZulu-Natal iDurban Heat (Heat). Okunye okudonsa abalandeli abadlali abanamava nabadlala ikhilikithi yamazwe ngamazwe abadlala kula maqembu. Kulaba badlali kubalwa u-Alex Hales odabuka e-England, uDavid Miller wakuleli odlalela iProteas badlala kuHeat, u-AB de Villiers oyintandokazi yabalandeli emhlabeni jikelele osedlala imidlalo yeT20 emhlabeni jikelele noWaqar Salamkheil odabuka e-Afghanistan badlalela iSpartans.
Usekelamqeqeshi weHeat u-Imran Khan ekhuluma nelaboHlanga uthe bazothembela kubadlali baphesheya kwezilwandle ngenxa yamava, “Abadlali abafana noHales noBopara banamava kanti futhi bafika nolwazi alubalulekile emidlalweni yeT20. Ngakho-ke basiza kakhulu ikakhulu abadlala abasebancane ngezinto okufanele bazenze enkundleni nangaphandle.”
La maqembu azimisele ukuyiqala kahle isizini kwazise nyakenye akhala ngaphansi. IHeat yaqeda isemsileni ngesizini eyedlule inqobe imidlalo emithathu kwathi iSpartans yaqeda endaweni yesibili mawusuka emsileni inqobe imidlalo emine. Ngaleyo ndlela yahluleka ukudlulela esigabeni esilandelayo.
UKhan uthe bayakuqonda ukuthi abazange babe nesizini enhle ngowedlule kodwa bazimisile ukwenza kahle kule sizini. Uqhube wathi, “Siyakholelwa kubadlali esizogadla ngabo ngenxa yamagalelo abo, silungele nayi noma yini esingabhekana nayo.”
IHeat izothembela kubadlali basekhaya nabasijwayele isimo senkundla. Laba badlali babuye badlale eqenjini laseThekwini iHollywoodbet Dolphins elidlala imidlalo yalo eKingsmead. Kulaba badlali kubalwa uKhaya Zondo, uDavid Miller no-Andile Phehlukwayo.
Ngenhloso yakufuna ukwenza kahle iHeat ilande inkakha uGary Kirsten ukuba uzocija leli qembu. UKirsten waziwa ngamagalelo akhe njengoba wasiza ne-India yakwazi ukunqoba iNdebe YoMhlaba ngowezi-2011.
ISpartans sizobeka amathemba kubadlali abanamava nabadume umhlaba wonke jikelele abanjengo-AB de Villiers oteketiswa ngelika “Mr 360” ngenxa yamagalelo akhe okukwazi ukushaya ibhola kuyo yonke inkundla. Omunye umdlali obhekekile uWaqar Salamkheil oneminyaka eli-18 ukuba angakwazi ukuqhubeka nokwenza kahle kwakhe njengoba kade enza edlalela izwe lakhe.
Abadlali bazosebenzisa lo mqhudelwano ukuzakhela amagama ikakhulu abadlali abasakhula ukuze bazibeke ethubeni lokungena eqenjini lesizwe kwazise ngonyaka ozoya kuzobe kudlalwa imidlalo yeNdebe YoMhlaba yeT20 ezobe isingethwe yi-Australia.
Nyakenye lo mqhudelwano wavundulula abadlali abafana noRasie Van Dussen osedlalela iProteas. UVan Dussen odlalela iJozi Stars waqeda ehamba phambili kubadlali abenze imigijimo eminingi kulo mqhudelwano wanyekenye ngemigijimo engamakhulu angama-469. Omunye umdlali owazakhela igama uLutho Sipamla oneminyaka eli-19 owaqeda endaweni yesithathu kubadlali abanamawikhethi amaningi. USipamla odlalela iSpartans emveni kokwenza kahle wabe esebizelwa eqenjini lesizwe lemidlalo yeT20.
Omunye umdlalo ozobe ubhekwe kakhulu ngabalandeli obandakanya iqembu elivikela isicoco iJozi Stars ezobhekana neCape Town Blitz eNew Wanderers Stadium, eJohannesburg. Lo mdlalo uzoqala ngele-17h30. La maqembu iwona adlala umdlalo wamanqamu nyakanye lapho iJozi Stars yagcina idle umhlanganiso.
Lo mdlalo wanamhlanje uthathwa njengoyimpinda ngowamanqamu anyakenye lapho iBlitz izofuna ukubuyisa izinduku kanti neStars ngeke sizibeke phansi sifuna ukukhombisa ukuthi kungani sakwazi ukunqoba nyakanye nokuthi sithumele umlayezo ezimbangini ukuba bazimisele ukuzovikela isicoco sabo.
Umdlalo ophakathi kweDurban Heat neTshwane Spartans uzoqala ngehora le-12:30 emini. Yonke imidlalo yalo mqhudelwano izoboniswa kuSABC 3.